NextMapping | नेक्स्टमैपिंग ™ इन्फोग्राफिक्स
NextMapping मा™ हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्दछौं - हामी सजिलै पचाउन सकिने ढाँचामा अनुसन्धान प्रदान गर्नमा पनि विश्वास राख्छौं।
हाम्रो इन्फोग्राफिक्स कार्य विषयहरूको भविष्यमा 'ड्यासबोर्डहरू' हुन्।
भविष्य यहाँ छ - एक हाइब्रिड कार्यस्थल मा अग्रणी
हामी दृढतापूर्वक कामको नयाँ संसारको 'अब' मा छौं - कुञ्जी नेताहरु र टीमहरु को लागी एक अवसर को रूप मा परिवर्तन को यो लहर हेर्न को लागी हो।
हामी सबै हाम्रो धैर्य, हाम्रो सहानुभूति र हाइब्रिड कार्यस्थल मा एक अर्का को बारे मा हाम्रो समझ बढाउन को लागी खिचिएको छ।
हाइब्रिड कार्यस्थल यहाँ रहन को लागी छ। के तपाइँ र तपाइँका नेताहरु यो नयाँ वास्तविकता मा सफल हुन सुसज्जित हुनुहुन्छ?
कसरी नेताहरूले अपस्किल गर्न र भविष्यमा नयाँ व्यापार आवश्यकताहरू पूरा गर्न कार्यबललाई पुन: कौशल गर्न सक्छन्
त्यहाँ व्यक्तिहरु, नेताहरु र कामदारहरु को लागी कौशल अन्तर को पहिचान गर्न र अर्को सामान्य नेभिगेट गर्न को लागी आवश्यक कौशल को निर्माण मा 'अब के छ' को लागी एक योजना निर्माण गर्न को लागी एक तत्काल आवश्यकता छ।
Sk कौशल कामदारहरूले कामको 'अर्को' सामान्यमा सफल हुनु आवश्यक छ
टाढाको कामको उदय र भविष्यको हाइब्रिड मोडल काम गर्ने (रिमोट / इन-अफिस) को साथ हामी सबैले आफ्नो 'मानव' सीप वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
यो इन्फोग्राफिक अन्तरदृष्टि र विकासको कौशल प्रदान गर्दछ श्रमिकहरूले आवश्यक 'अर्को' कामको सामान्यमा सफल हुनको लागि।
कामको नयाँ र 'अर्को' सामान्य
पोस्ट-महामारी जीवन र कार्य वास्तविकता कस्तो भइरहेको थियो भन्दा धेरै फरक देखिदैछ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?
यो इन्फोग्राफिक दुबै तथ्या and्क र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ तपाईंको सीपहरू बढाउनको लागि हाम्रो 'अर्को' कामको सामान्य अवस्थामा।
टाढाको रूपमा कार्य गर्दा कसरी अधिकतम उत्पादकत्व गर्ने
टाढैबाट काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कसरी उत्पादक रहिरहनु हो।
हामी प्रदान गर्दछौं 8 सुझावहरू कसरी दैनिक जीवनमा तपाईको सब भन्दा उत्पादक हुन सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न मा।
यो इन्फोग्राफिक दुबै तथ्या and्क र उपकरणहरू प्रदान गर्दछ कसरी तपाईंको प्रभावकारिता टाढा टाढा कार्य गर्ने बढाउनको लागि।
NextMapping™ कामको नयाँ सामान्य
कोरोनाभाइरस महामारीले प्रमाणित गरेको छ कि काम कहिल्यै उस्तै हुँदैन।
पछिल्ला केही हप्ताहरूमा कार्यस्थलको संस्कृतिले देखाउँदछ कि कम्पनीहरूले दुर्गम कामदारहरूसँग सफल हुन सक्छन्। महामारी पोस्ट पछि यो 'सामान्यको रूपमा व्यवसाय' हुने छैन यो 'व्यवसायको नयाँ सामान्य' हुनेछ।
यसको मतलब नेताहरू फुर्तिलो, समानुभूतिशील र अवस्थित संरचनाहरू परिवर्तन गर्न इच्छुक हुनु आवश्यक छ 'जनतामा ध्यान केन्द्रित गर्न'।
यो इन्फोग्राफिकले "NextMapping मा तथ्या gives्क दिन्छ™ कामको नयाँ सामान्य। "
नवीनता: २०२० र पछाडि लागि महत्वपूर्ण रणनीति
सर्वेक्षण गरिएको of।% कार्यकारीले भनेका छन कि २० and० र त्यस भन्दा पछाडिको नवीनता एक रणनीतिक जरूरी हो।
नवीनताले वास्तविक-समय रचनात्मकता समावेश गर्दछ र दुबै व्यक्ति र सांस्कृतिक पign्क्तिबद्धता आवश्यक छ।
यस नयाँ इन्फोग्राफिकमा नवीनताको आरओआई र केही कम्पनीहरू जो 'जित्ने' इनोभेसनमा खोज्नुहोस्।
भिडियो किन कार्यको भविष्यका लागि 'रणनीति गर्नुपर्दछ' हो
के तपाइँ र तपाइँको कम्पनी भर्ती गर्न र तपाइँको शीर्ष प्रतिभा कायम गर्न भिडियो लीवरेज गर्दै हुनुहुन्छ?
अनुसन्धानले देखाईएको छ कि सम्भावित रोजगारदाताहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि भिडियो मोबाइल दर्शकहरू र मिलेनियलहरू र जेन जेडको 67% द्वारा प्रयोग गरिएको छ।
भिडियो किन कामको भविष्यका लागि रणनीति हुनुपर्दछ भन्ने बारे थप जान्नको लागि हाम्रो टीमले नेक्स्टमेपिंगमा यो नयाँ इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस्।
NextMapping ™ - अनुमान, नेभिगेट र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्
अध्याय १-1 नयाँ पुस्तकबाट इन्फोग्राफिक्स, नेक्स्टमैपिंग ™ - अनुमान, नेभिगेट र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्
मिलेनियलहरू र जनरल जेडको भविष्य तयार कार्यस्थलमा भर्ती गर्दै
प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा बढ्न गइरहेको छ किनकि मानिसहरूसँग कामको लागि पहिले भन्दा बढी विकल्पहरू थिए।
कम्पनीहरूले अब प्रतिभाशाली मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न र राख्न विश्वव्यापी रूपमा अन्य कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। चुनौतीमा थप्न हजारौं वर्ष र जन जेडले एक उद्यमी बन्ने छनौट गरिरहेका छन्।
तपाईं कसरी हजारौं र जनरल जेड को भर्ती को अग्रणी धार मा हुन सक्छ?
कार्यको भविष्यको लागि भर्ती गर्न तथ्या and्क र अन्तर्दृष्टिको साथ यो इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्।
कर्मचारीहरूले डिजिटल आन्दोलन र एआई अँगाले
यस्तो देखिन्छ कि धेरैजसो मानिसहरू अधिक डिजिटल रूपान्तरणको लागि उत्सुक छन् र एआई - थप जान्नको लागि हाम्रो इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्।
8 नेतृत्व ह्याकहरू टाढाको टोलीहरूको नेतृत्व गर्न
२०2030० सम्ममा teams०% टोली टाढाबाट काम गर्नेछन् - तपाईको कम्पनीले हाल टाढा टिम छ वा नेताहरूले टाढाको श्रमिकहरूलाई संलग्न गराउनको लागि विशेष रणनीतिहरू हुनु आवश्यक छ।
टाढाका कामदारहरूले टाढाको रूपमा काम गर्ने फाइदाहरू चाहन्छन् र उनीहरू टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा समावेश भएको महसुस गर्न चाहन्छन्।
8 मानव कौशल नेताहरू कामको भविष्य नेभिगेट गर्न आवश्यक छ
कामको भविष्य एक अवधारणा होइन, यो वास्तविक हो र आज हाम्रो निर्णय र कार्यहरू द्वारा बनाईएको हो।
प्रविधिको नवीनता मानिस समाधान बढाउनको लागि आवाश्यक हुन्छ र भविष्यको सिर्जनाको फाइदा लिन हामी सबै टेक-प्रेमी हुनु आवश्यक छ। जहाँसम्म, टेक्नोलोजी एक्लो हाम्रो इष्टतम भविष्य सिर्जना गर्न गइरहेको छैन, यो जनता हो र भविष्यमा पूर्ण रूपान्तरण गर्न गइरहेको छ कि मान्छे मा ध्यान पहिलो।
8 मानव कौशलमा यो इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस् जुन नेताहरूले कार्यको भविष्य नेभिगेट गर्न आवश्यक छ।
शीर्ष 10 परिवर्तन गर्दछ प्रत्येक नेतालाई भविष्यको लागि तयार हुन आवश्यक छ
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कसरी केही व्यक्तिहरू एक विचार प्राप्त गर्न र छिटो यसमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन्?
सामान्यतया यसको किनभने त्यस व्यक्तिको उच्च स्तरको 'परिवर्तन नेतृत्व' विकास भएको छ - अनुकूलन गर्न, सिक्न र चाँडै कार्य लिने क्षमता।
नेताहरूले भविष्यमा तयार हुनका लागि नभई द्रुत र प्रभावकारी रूपमा 'भविष्य सिर्जना गर्न' सक्षम हुनुपर्दछ परिवर्तनहरूको यस इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्।
10 का लागि शीर्ष 2018 लीडरशिप ह्याक्स
अधिकांश नेतृत्व अभ्यास जुन हामीलाई आज हामी भएको ठाउँमा पुग्यौं जहाँ हामीलाई कामको भविष्यको लागि हुनु आवश्यक भएको ठाउँमा पुग्दैन।
यो इन्फोग्राफिकले 2018 को लागी लागू लिडरशिप ह्याक्स प्रदान गर्दछ।
भविष्य तयार संगठनहरूको 13 सफलता कारक
कम्पनीहरूसँग स्थान वा नेतृत्व रणनीतिहरूमा केहि संरचनाहरू भविष्यका तयारी संगठनहरूको अग्रणी किनारामा छन्।
हाम्रो डाउनलोड गर्नुहोस् 'एक झलकमा' काम इन्फोग्राफिकको भविष्य यसले कामको भविष्य कस्तो देखिनेछ भनेर नवीनतम डेटा प्रदान गर्दछ र कसरी तपाइँ तपाइँको रणनीतिहरू र दृष्टिकोणहरू एक नेताको रूपमा र तपाइँको कम्पनीको लागि आकार दिन सक्नुहुन्छ भन्नेमा एउटा टाउको दिनुहुन्छ।
साझेदारी गरिएको नेतृत्व: सबै एक नेता हो
हाम्रो डाउनलोड गर्नुहोस् 'एक झलकमा' साझा नेतृत्व इन्फोग्राफिक त्यो के मा नवीनतम डाटा प्रदान गर्दछ साझा नेतृत्व अवधारणा कामको भविष्यमा जस्तै देखिनेछ।
हाम्रो भविष्यका नेताहरूको विकास गर्दै
के तपाईंलाई थाहा छ हरेक 19 बर्षको लागि 10,000 बेबी बुमर्स 65 उमेर पुग्नेछ र पहिले नै आज मिलेनियलले विश्वव्यापी रूपमा 50% कर्मचारीहरू बनाउँछन्?
नयाँ नेतृत्व कौशल सहस्राब्दी र जनरल जेडको अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक छ। यस इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस् जुन मूल्यवान जानकारी छ जुन तपाईंलाई तिनीहरूको आवश्यकताहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं तिनीहरूको विकासको लागि सफलतापूर्वक योजना गर्न सक्नुहुनेछ!
काम संगठन को भविष्य
कामको भविष्य अब र हो संगठनहरू फ्यूचर फोकस हुनु पर्छ सफल हुनु। यो खुलासा इन्फोग्राफिक डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईंको फोकस कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि ... भूत वा भविष्य!
बहु परिप्रेक्ष्यहरूको5लेन्सहरू
काम कौशलको एक महत्वपूर्ण भविष्य सबै कोणबाट हेर्ने क्षमता हो। आत्म / अन्य / उद्योग / ग्राहक / वैश्विक को लेन्स मार्फत परिस्थिति देखेर यो माध्यम - यो इंफोग्राफ़क काम को भविष्य को लागि एक धेरै दृष्टिकोण क्षमता निर्माण गर्न कसरी मा अंतर्दृष्टि दिन्छ।
कार्य नेताहरूको भविष्यको साथ5प्रेरणादायक कम्पनीहरू
कार्यको इन्फोग्राफिकको यो भविष्य डाउनलोड गर्नुहोस् जुन5बिभिन्न कम्पनीहरूको उदाहरण साझा गर्दछ र नेताहरू कसरी भविष्यको तयारीको तत्त्व अभ्यास गरिरहेका छन् र हामी तिनीहरूको दृष्टिकोणबाट के सिक्न सक्छौं।
ह्वाइटपेपर डाउनलोड गर्न अहिले नै साइन अप गर्नुहोस्